Mapoto egirazi ane zvitsigiso zvemapuranga - Crafts to recycle | Crafts On
Mabhodhoro egirazi ane zvitsigiso zvemapuranga
Alicia tomero | 14/11/2021 17:43 | Yakagadziridzwa ku 22/11/2021 23:27 | Decoration, Crafts, Humba Dzemhizha
Iyi mhizha ndeimwe yeavo vatinoda kushongedza chero kona yeimba. Nezvikepe zvishoma kana Zvirongo zvegirazi tinogona kuita zvimwe zvitsigiso zvematanda uye zadzisa chitarisiko ichocho chevintage chatinoda zvakanyanya. Tinogona zadzai namabwe zvehukuru hwakasiyana uye mavara uye wobva wawedzera chirimwa chechisikigo kana chakagadzirwa. Iwe zvakare une sarudzo yekushandisa zvidiki makandulo kupa kubata kwerudo.
1 Zvinhu zvandashandisa kugadzira mapoto:
2 Nheyo ine popsicle tsvimbo:
2.1 Danho rekutanga:
2.2 Nhanho yechipiri:
3 Nheyo ine sikweya matanda ematanda:
3.1 Danho rekutanga:
3.2 Nhanho yechipiri:
3.3 Nhanho yechitatu:
Zvinhu zvandashandisa kugadzira mapoto:
Miti yemapuranga kutevedzera ice cream tsvimbo.
Square matanda matanda 0,5 cm yakafara.
Inopisa silicone nepfuti yako kana yakakosha huni glue.
Zvimwe zvigero zvakasimba zvekutema huni kana zvimwe zvakafanana.
Hurungudo shoma dzekuzadza zvirongo zvemasoni.
Plastiki kana miti yakasikwa yekushongedza.
Unogona kuona danho renyanzvi nhanho muvhidhiyo inotevera:
Nheyo ine popsicle tsvimbo:
Ngatitei chigadziko chematanda. Tichatora zviyero zvehupamhi hwegirazi chirongo muchimiro chemaruva. Tinoisa zviyero izvozvo padanda rehuni uye tinocheka kuyerwa kwavo. Tichaita 32 kucheka kuyera kuti gare gare kugadzira tacos.
Isu tinobatana ne glue kana silicone tsvimbo ina, kugadzira rudzi rwechivharo chemapuranga. Vanofanira kunge vakanyatsoenderana uye compact. Tichabatanidza makona ayo nenamo, asi uchichipa icho chimiro cheskweya, kwete rectangular chimiro. Saka tichava nenheyo yedu yekutanga yehuni.
Nheyo ine sikweya matanda ematanda:
Tinoyera hwaro kana dhayamita yehari yakaita sehari. Sezvo matanda ari 0,5 cm yakafara tinofanira kusiya margin, kuwedzera kune zvatakayera 1 cm zvimwe. Tinoisa zviyero padanda uye tinocheka 8 zvidimbu. Tichachekawo tsvimbo ina dze 3 cm.
Tinobatanidza magumo ematanda mana ne glue. Tichagadzira sikweya yakakwana kwete rectangle. Tichazviitawo nemamwe matanda mana akareba. Iwo mana madiki 3 cm anonamatira tichavaisa pane imwe neimwe vertex kushanda sechitsigiro pakati pezvivakwa zviviri izvi.
Kana tangobatanidza chimiro chese tichazadza imwe yezvirongo nematombo yehukuru hwakasiyana uye isu tichaisa imwe ye zvirimwa zviduku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Mabhodhoro egirazi ane zvitsigiso zvemapuranga
Crafts yekushongedza imba nekusvika kwechando
15 nyore uye yakanaka mhizha nemvere dzemakwai